Le yindlela i-HomePod Mini entsha ejongeka ngayo ngaphakathi, uya kuba nemibono | IPhone iindaba
El I-MiniPod Mini Kuthatha izigqubuthelo ezininzi mva nje, ngokucacileyo sijongane nenye yezona mveliso zibethayo ezithe zasungulwa yiApple mva nje kuba izisa abasebenzisi uhlahlo-lwabiwo mali oluqatha kwindawo yeKhayaPod kwisithathu sexabiso ebelixabisile ngaphambili.
Nangona kunjalo, Kwakukuninzi okungaziwayo malunga nomphakathi weMiniPod Mini, ngoku ene "teardown" eya kuthi isibonakalise konke ukubamba kwayo. Yile ndlela ufumanisa ngayo ingaphakathi lale mveliso ikhethekileyo etsala umdla wabantu basekuhlaleni nabasemzini. Nangona kunjalo, njengoko bekulindelwe, iApple khange ibonelele ngezixhobo ngokwenziwa kwayo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ukusika kwenziwe inyathelo ngenyathelo ngumsebenzisi weforum MacRumorsAkumangalisi ukuba umntu angangcolisa njani isixhobo esimbize i-euro ezilikhulu. Inyani yile yokuba kwinqanaba loyilo lwangaphakathi yonke into ijongeka icocekile njengoko besinokulindela ku-Apple. Nangona kunjalo, asinakho ukuphoswa lithuba lokukhankanya inyani yokuba intambo ayisuswanga.
Njengomgaqo ngokubanzi, intambo yamandla kolu hlobo lwesithethi phantse ihlala kulula ukuyibeka kwaye ikhuphe, ndihlalutye iimveliso ezivela I-Sonos, iAmazon Echo, iSistem yamandla ... Andizange ndibone enye apho intambo ayinakususwa ngokulula.
Kodwa njengesiqhelo, iApple iyinkokeli kule micimbi. Inentambo engenakususwa kwaye, nangona kunjalo, yakuba ingaphakathi, iqhagamshelwe yinkqubo yezikhonkwane zentsimbi elula kunendlela yejagi. Bafihla into ngobunzima obungenangqondo. Ukuphumla sinako oko besikulindele ngaphakathi kwaye ungacinga ukuba kwinqanaba lokulungiswa phantse akunakwenzeka. Okwangoku, sisalinde umlingane wethu uLuis Padilla ukuba asizisele uphononongo. Uyayibona yonke imifanekiso apha [LINK]
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Yile nto ijonga ngayo iPodPod Mini entsha ngaphakathi, uya kuba nemibono
Umyili wesicelo sefoto seHalide uhlalutya ikhamera ye-iPhone 12 Pro Max
I-Apple ibhengeza abaphumeleleyo kwi-2020 Apple Music Awards